Waad ku mahadsan tahay, Rikoo.
Su'aal Waad ku mahadsan tahay, Rikoo.
Bilood 8 3 todobaad ka hor #1259 by gaas
Waxaan aad u caajisey duufkii oo dhan.
Laakiin, markii ay soo qaadatay diyaarado fantastik ah halkan.
Waxaan awooday inaan dib u cusbooneysiiyo xiisaha aan u qabo duulimaadka.
Ma aqaano sida ay u sameeyaan. Ama sababta ay u sameeyaan.
Laakiin aad ayaan u faraxsanahay, way qabtaan.
Waad ku mahadsantihiin, goobaha qashinka ah.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.300